Sidee u sheegto haddii drive wax gaareen badbaadinayo files muhiim ah
Waxaa jira tobanaan kun oo ka mid ah Calaamooyinkiisa in arbushin ilaa sida ugu dhakhsaha badan drive ka adag yahay mid soo dhamaystiraya. A user arrintan la xiriira u baahan yahay si loo hubiyo in drive adag oo aan dhaqso lagu badalay oo kaliya laakiin files muhiim ah ayaa sidoo kale ku badbaadi taas oo dhab ahaantii baahida loo qabo iyo baahida ee ku dhow% dadka isticmaala raba drives ay si aad bedelay. Helitaanka gaari ku adag in si sax ah waa wax loo baahan yahay ee saacad sida uu u dhaqmo sida xarun dhexe ee kombiyuutarka ay nolosha oo dhan hawlaha kale ee ku xiran yihiin. Ka dib markii qaar ka mid ah calaamooyinka oo loo hubiyo in drive adag waa uu ku dhintay oo bedel waa in la sameeyaa:
Kombiyuutarka caanuhu iyo daaha buluug ah dhimashada u muuqataa xitaa hadii rakibo waxaa loo sameeyaa dhawaan arrinta ka dhigan tahay in hardware waxaa si joogto ah ay ku guuldareysteen kaas oo la xiriira gaari ku adag in ku dhowaad 95% ee kiisaska.
Haddii xogta la is kharribeen marka faylasha lagu soo rakibay oo aan qalad ah ama arrin la soo gudboonaado oo ah qaab ka lumay file ka dibna user waa in si dhab ah ka fikir isbedel ku drive adag sida ay tahay sababta ka dambeysa dhibaatadan.
Bad kororka saamiga qaybta waa calaamad kale oo la xiriira in ay ku drive failure adag . Waxaa loola jeedaa in xaalada ayaa ah mid ay ka sii daraysaa sharafta xogta aan la wada ilaaliyo, by drive ka. Iyada oo lagu ogaanayo ee la ordi karaan, waayo, taasu aqoonsiga waaxda xun waa calaamad walwalo.
Dhawaaqa qariibsado ka soo baxay drive adag mararka qaarkood marka PC ama laptop way rogmatay on. Codka A gaarka ah ee arrintan la xiriira waxaa sidoo kale loo yaqaan click dhimashada waana mid ka mid ah sababaha taas oo keeni in isbedel drive adag oo waxa loo arki karaa calaamad u ah drive adag noqday dhintay ugu dhaqsaha badan.
Haddii files muhiim yihiin badbaadiyey on inay xusuusta markaa xogta badbaadi kartaa adigoo soo socda mid ka mid ah talaabooyinka soo socda maadaama ay jiraan fursadaha helitaanka daafaca ka adag waxyeelo la wado iyo waliba xogta:
User waa in la hubiyo in drive dhintay ama dhaawacmay waxaa loo baaro ka dib markii warbixin sax ah ayaa lagu soo ururiyey in arrintan la xiriira sameeyo.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo software kabashada xogta oo la hubiyo in drive xun adag waxaa soo kabsaday iyo xogta muhiimka ah waxaa lagu badbaadiyey. User ayaa ku rakibi karo oo ay maamulaan barnaamij kasta oo kale.
Haddii labada go'aamada kor ku xusan markaa ku fashilanto waxaa lagu talinayaa in aad gargaar u hesho xirfad leh si aan dhibaatada la xalin la gacmaha khabiir.
Inta badan oo ka mid ah barnaamijyada software-kabashada la socoto falanqaynta ee SMART xogta macluumaadka waxaa si toos ah ku hayo OS eee drive adag. Marka drive adag waxaa falanqeeyay ay u xidha dekedda kale ee PC ka dibna xogta la akhriyo oo la badbaadin karaa. In si kale loo dhigo software xogta SMART lagu rakibay nidaam kale waxay kaloo ka caawisaa adag dibadda kaxeeya si ay u soo kabtaan iyo aad u hesho xogta badbaadiyey.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada software ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo si loo hubiyo in xogta ka ah drive dhintay ama ku dhameysatay kaalinta adag waxaa soo kabsaday hab ku haboon isticmaala. Barnaamijkan waxaa loogu talo galay dadka isticmaala labada heer horay iyo kuwa waa inuusan ahaan adduunka kombiyuutarada. Waxaa sidoo kale in la xusay in waxa ugu fiican in la siiyo dadka isticmaala sida kabashada xogta wuxuu noqon karaa 100% hubiyo in markii barnaamijkan waxaa loo isticmaalaa. Iyada oo gobolka ka mid ah farshaxanka iyo muuqaalada fudud Wondershare Data Recovery waa inuu xaqiijiyo in qasabno yar oo keliya waxaa lagu sameeyey arrintan la xiriira iyo xogta la isla markiiba soo kabsaday. Hab saaxir ama kabashada doorasho file waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo oo aan ka kaaftoomi kasta oo ka mid ah kuwa guryaha in aan la amaanay oo kaliya dadka isticmaala, laakiin ma jiro oo ka mid ah tartamayaasha ah Wondershare ayaa soo xal sida. Barnaamijka waa inuu xaqiijiyo in macluumaadka la soo kabsaday labada bixisaa iyo Sata drives adag sidaa darteed waa la jaan qaada oo dhan noocyada waaweyn ee laga heli karo suuqa. Nooc ayaa file taasoo ay taageereyso barnaamijka yihiin sawiro, PDF, files xafiiska oo dhan waraaqaha muhiimka ah user a ka fikiri karaa. Waxay ka dhigaysa hubiyo in xogta soo kabashada waxaa loo sameeyaa iyada oo aan ling oo halkan ka tallaabooyinka barnaamijkan waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican sida ay user rating ah.
Hab kabashada File (hab Wizard)
Tani waa tallaabo ugu fudud oo uu soo gundhig barnaamijkan gudaha iyo waa u fududahay in la isticmaalo. Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka ay la raaco si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
Sida ugu dhakhsaha badan barnaamijka la bilaabay saaxir ama hab kabashada file u muuqataa meesha button soo socda waa in la adkeeyey,
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in nooca faylka la doorto ee arrintan la xiriira:
Ka dib markii xulashada scan moolka iyo meesha uu ka yimid meesha files yihiin ilaa E soo kabsaday barnaamijka ordi doonaa on gaar ceshan doonaa faylasha lumay fudayd iyo qanacsanaanta isticmaalaha:
Function soo kabashada xogta ceeriin
Waxa kale oo loo arki karaa feature ah oo uu soo gundhig gudahood barnaamijka oo dhan, kuwa dadka isticmaala kuwa heer ka hor. Si aad u hubiso in geeddi-socodka lagu sameeyo habka ugu wanaagsan ee soo socda waa saddex tallaabo muhiim ah in ay tahay in la raaco:
Markii barnaamijka waxaa maamula user ay u baahan tahay in ay doortaan Standard Mode> kabashada file ceeriin ah:
User ayaa markaas u baahan yahay in ay doortaan Risaalo ka halkaas oo dib u soo kabashada waa in la sameeyo:
In talaabadan user ay u baahan tahay in la hubiyo in goob ku haboon waxaa loo doortay badbaado file iyo badhanka soo kabsado la isku soo riixayo si loo hubiyo in hab-socodka la soo gabagabeeyo. Waxaa kale oo lagu talinayaa in marnaba badbaadin file a in ay isku meel halkaas oo ay lumay,
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga baabuur waxyeelo adag